NextMapping | Tanjona fampandrosoana fampandrosoana ho an'ny ekipa
NextMapping™ ho an'ny Teams
Ny toeram-piasana ho avy dia mitaky ekipa mpandray anjara amin'ny fomba fiarahana 'fizarana'.
NextMapping ™ ho an'ny ekipa manampy amin'ny fananganana tanjona ho an'ny fampandrosoana fampandrosoana matihanina, fahatoniana ary fahitana mialoha.
Amin'ny ho avy, ny fahombiazan'ny ekipa dia ny fahaizan'izy ireo mitantana tena. ”
NextMapping ™ Ekipa Vonona Ho avy - Ahoana no fomba hamoronana ekipa mailaka, azo ampifanarahina ary tsy misy fanavaozana
Ity hoavin'ny fikaonan'ny ekipa ity dia manome fikarohana sy paikady momba ny ho avin'ny ekipa sy fahatakarana ny fomba fiorenan'ny ekipa mba hiatrehana ny fanakorontanana sy ny fitakian'ity tontolo miova haingana ity. Ny fikarohana dia mampiseho fa ireo ekipa bitika manana olona mavitrika sy mirona dia afaka manova sy manatanteraka haingana. Ny fiantraikan'ny orinasa miaraka amin'ireo ekipa mpanao fampisehoana ambony dia hevitra haingana kokoa amin'ny tsena, vahaolana tsy misy dikany ho an'ny traikefa azon'ny mpanjifa ary farany tombony amin'ny fifaninanana.
Fampivoarana fahaiza-manao ho avy vonona ho an'ny ekipa
Ny ekipa dia manana tanjona sy fanandramana mivoatra tokana rehefa miasa mandroso valiny miavaka ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa izy ireo. Ireo fanamby ireo dia ny fampifanarahana ny zava-misy haingam-pandeha amin'ny fanovana mitohy, ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny olona manokana, ny taranaka maro, ny ekipa lavitra ary ny hevitra samy hafa. Ny fomba fanaonay mpanazatra manokana amin'ny fanampiana ny tarika hanampiana ny 'inona no ho avy' dia manome ny drafi-pampandrosoana matihanina NextMapping ™ ho an'ireo ekipa mba hitarika amin'ny fomba mavitrika ireo fanovana ilaina mba ho vonona amin'ny ho avy.
Ny ho avin'ny asa an-tserasera
Amin'ny ho avin'ny asa dia ho mpitarika daholo izay miasa ao amin'ny kolontsaina mpitarika iraisana. Tsy midika akory izany fa maro ny olona manana lohateny fitarihana - midika izany fa ny kolontsaina mihitsy dia mifantoka amin'ireo rehetra mandray andraikitra feno amin'ny valiny, ny fananganana ny fahaiza-manao 'intrapreneurial' ary ny fampitomboana ny fahaizan'ny tsirairay miara-miasa sy manavao amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa. Ny hoavintsika an-tserasera amin'ny taranja fampandrosoana fampandrosoana matihanina miasa dia miorina amin'ny horonantsary ary azo raisina miaraka na tsy misy ny fanohanan'ny mpanazatra.
Amboary ny NextMapping™ drafitra ho an'ny ekipa
Ny ekipa dia mandrafitra olona ary tokana ny olona. Ny tanjon'ny fampandrosoana fampandrosoana arak'asa ho an'ny ekipa amin'ny ho avy miasa dia misy koa ny fampiroboroboana toe-tsaina 'ahy ho antsika'. Ny fiaraha-miasa tena izy dia ahitana ny olona rehetra mandrafitra ny fahatsiarovan-tena, fandinihan-tena ary fahaiza-manavaka. Miaraka amin'ny dingan'ny consulting NextMapping ™ dia manampy amin'ny fanombatombanana ny tanjaky ny olona eo amin'ny ekipa isika, dia manombatombana ny tanjaky ny ekipa ho fiaraha-mientana ary manome vahaolana sy paikady ho an'ny ekipa hahafahan'izy ireo miara-miasa miaraka amin'ny fifantohana, fanentanana ary sinema be loatra.
Amboary ny satronika ekipa
Ny ekipa dia miasa mafy kokoa noho ny taloha, fe-potoana mahery vaika, kendrena lehibe kokoa ary fanerena mitohy raha te-hahomby kokoa. Matetika ny ekipa dia mirona amin'ny asa sy ny zavatra tokony hatao anio ary zara raha misy fotoana hifantohana amin'ny famoronana sy fanomanana ny mety hisorontana mety. Miaraka amin'ny fampiofanana NextMapping ™ ho an'ny ekipa dia manome fitaovana ary drafi-pampandrosoana NextMapping ™ isika hanampiana ny mpikambana ao amin'ny ekipa hanana ny hoaviny, vahaolana amin'ny atidoha ary hamorona fomba hiarahana miasa ireo ekipa.
Ampianaro anao izahay - fantaro misimisy momba ny fomba fananganana ekipa vonona amin'ny ho avy eo amin'ny toeram-piasana - manantona fa tianay ny hifandray aminao.